China Ems Pcb Assembly Manamboatra sy Manamboatra | KAISHENG PCB
Sosona: 14 Layer PCB
Fitaovana vy: HASL - Maimaim-poana Fomba famokarana: SMT + Layers: PC Layer 14
Karazana solder: tsy misy firaka (mifanaraka amin'ny RoHS) Serivisy tokana: singa, famokarana PCB, fivoriambe PCB Fitsapana: Fitsapana 100% AOI / X-ray / Visual
Fanohanana ny Tehnolojia: Hizaha DFM (Volavola ho an'ny famokarana) maimaimpoana Karazana fivoriambe: mifangaro teknolojia PCBA Fenitra: IPC-a-610d
Teny lakile: EMS PCB Assembly, PCB Assembly Service, PCB Assembly Process, PCB Population, PCB Assembly Manufacturer, PCB Assembly Cost, Cheap PCB Assembly,
Avy amin'ny fanamboarana PCB mahazatra sy fanao mankany amin'ny vahaolana PCB turnkey, PCBFuture dia nanaporofo ny tenany ho serivisy tokana ho an'ny zavatra rehetra PCB.
Fa maninona no ampiasaina ny serivisy fivoriambe PCB?
Manolo-tena izahay hanome vokatra avo lenta avo lenta amin'ny vidiny mifaninana tokoa. Nampifanaraka ny orinasanay tamin'ny ekipa mpiara-miasa stratejika hihaona amin'ny filan'ny mpanjifanay izay miovaova hatrany.
Manomboka amin'ny fanomezana ny takelaka boribory hatramin'ny fitaovana elektronika vita, manana ekipa matihanina izahay. Noho ny zavatra niainantsika naharitra, dia afaka manolotra optimum amin'ny kalitao, azo itokisana fandefasana, ary azo tanterahina ara-toekarena.
Haterinay haingana kokoa ny vokatrao noho ny mpanamboatra PCB hafa any ivelany eny an-tsena.
Optimum amin'ny kalitao
Serivisy fivarotana tokana
Ny fotoana fandefasana PCBA dia mifandraika akaiky amin'ny fiomanana mialoha. Mila manome ireto entana manaraka ireto aloha ny mpanjifa. Ireo entana dia azo ataterina ao anatin'ny 3 andro aorian'ny famenoana ny fitaovana rehetra. Raha misy ny fanodinana DIP dia maharitra 5-7 andro vao hatolotra. Raha misy baiko maika dia afaka mampandre mialoha isika ary afaka manao fandaminana hafa.
Vaovao ho voaomana amin'ny fikarakarana PCBA:
1. Famokarana BOM mahazatra
2. rakitra PCB;
3. Amin'ny alàlan'ny fisie;
4. Jigsaw Gerber fisie;
5. Fametrahana toerana fisie rakitra;
6. Lisitra fampifangaroana SMT fitaovana eo aloha sy aoriana, fitaovana ary lisitra DIP.
Izahay dia manatitra ireo fivorian'ny birao avo lenta avo lenta ara-potoana sy ao anatin'ny tetibola, tohanan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa tena tsara sy ny fanamboarana tsy misy fotony ary ny famerenana ny politika hanomezana kalitao ambony. Raha manana fanontaniana na manontany ianao dia aza misalasala mifandraysales@pcbfuture.com , hamaly anao izahay ASAP.
Teo aloha: Controller Board Printed Circuit Assembly
Manaraka: Serivisy Flex PCB Assembly
Fivoriamben'ny boriborintany fanaraha-maso an-trano Smart Home